Izindaba - Isingeniso sebhethri semodeli ye-Aluminium
Aluminium ipuleti imodeli sebhithi isingeniso
Zingaki izinhlobo zamapuleti ensimbi e-aluminium akhona? Isetshenziswa kuphi?
Lapho uthenga ama-aluminium veneers, sivame ukubona ukuthi kusetshenziswa amapuleti e-aluminium ayi-1100 njengezinto zokusetshenziswa. Ngakho-ke zimeleni kahle lezi zinhlobo zamapuleti e-aluminium?
Ngemuva kokuhlunga, kutholakala ukuthi amapuleti e-aluminium amanje angahlukaniswa cishe ngezigaba eziyi-9, okungukuthi, uchungechunge olungu-9. Okulandelayo isingeniso ngesinyathelo ngesinyathelo:
1XXX uchungechunge aluminium okumsulwa, okuqukethwe aluminium akuyona ngaphansi kuka 99,00%
Uchungechunge lwe-2XXX ngama-aluminium alloys anethusi njengento eyinhloko yokuhlanganisa
Uchungechunge lwe-3XXX zingama-alloys e-aluminium ane-manganese njengengxenye eyinhloko yokuhlanganisa izinto
Uchungechunge lwe-4XXX ngama-aluminium alloys ane-silicon njengeyona nto eyinhloko yokuhlanganisa izinto
Uchungechunge lwe-5XXX ngama-aluminium alloys ane-magnesium njengento eyinhloko yokuhlanganisa
Uchungechunge lwe-6XXX ama-alloys e-magnesium-silicon aluminium ane-magnesium njengengxenye enkulu yokuphamba kanye nesigaba se-Mg2Si njengesigaba sokuqinisa
Uchungechunge lwe-7XXX ngama-aluminium alloys ane-zinc njengengxenye eyinhloko yokuhlanganisa izinto
Uchungechunge lwe-8XXX angama-aluminium alloys nezinye izinto njengezinto eziyinhloko zokuhlanganisa
Uchungechunge lwe-9XXX yiqembu lesipele se-alloy
1. Omele uchungechunge lwe-1000 1050 1060 1070 1100
I-1000 series aluminium plate ibizwa nangokuthi i-pure aluminium plate. Phakathi kwalo lonke uchungechunge, uchungechunge lwe-1000 lungoluchungechunge ngokuqukethwe kwe-aluminium kakhulu, futhi ubumsulwa bungafinyelela ngaphezu kuka-99.00%. Ngoba ayiqukethe ezinye izinto zobuchwepheshe, inqubo yokukhiqiza ilula futhi intengo ishibhile. Njengamanje iluchungechunge olusetshenziswa kakhulu ezimbonini ezivamile. Uchungechunge lwe-1050 ne-1060 lusatshalaliswa kakhulu emakethe. Ipuleti le-aluminium elingu-1000 licacisa ubuncane be-aluminium yalolu chungechunge ngokusho kwezinombolo ezimbili zokugcina zase-Arabhu, ezinjenge-1050 chungechunge, ngokwesimiso somhlaba jikelele sokuqamba igama, okuqukethwe kwe-aluminium kufanele kufinyelele kuma-99.5% noma ngaphezulu ukuze kube ngumkhiqizo ofanelekayo.
2. 2000 omele uchungechunge 2A16 2A06
Ipuleti le-aluminium elichungechunge le-2000 libhekene nobulukhuni obuphakeme, nokuqukethwe okuphezulu kakhulu kwethusi, okubalelwa ku-3% kuye ku-5%. 2000 uchungechunge aluminium amapuleti yizinto zezindiza ze-aluminium, ezingasetshenziswa kakhulu ezimbonini ezivamile.
Abathathu. Ummeleli wochungechunge lwe-3000 3003 3004 3A21
Amapuleti e-aluminium e-3000 ochungechunge angabizwa nangokuthi amapuleti e-anti-rust aluminium. Ubuchwepheshe bokukhiqizwa kwamapuleti e-aluminium ayi-3000 ezweni lami buhle kakhulu. Ipuleti le-aluminium elichungechunge le-3000 lenziwe ngama-manganese njengengxenye eyinhloko, futhi okuqukethwe kuphakathi kuka-1% no-1.5%. Luhlobo lwe-aluminium olunomsebenzi omuhle wokulwa nokugqwala. Imvamisa isetshenziswa ezindaweni ezinomswakama ezinjengama-air conditioners, amafriji nezimoto zangaphansi. Intengo ingaphezulu kochungechunge lwe-1000, futhi futhi iluchungechunge oluvame ukusetshenziswa kakhulu.
Isine. Uchungechunge lwama-4000 lumele u-4A01
Uchungechunge lwe-4000 luchungechunge olunokuqukethwe okuphezulu kwe-silicon. Imvamisa okuqukethwe kwe-silicon kuphakathi kuka-4.5% no-6%. Okwezinto zokwakha, izingxenye zemishini, izinto zokwakha nezinto zokushisela.
Okuhlanu. Umele uchungechunge lwama-5000 5052 5005 5083 5A05
Ipuleti le-aluminium elingu-5000 elichungechunge lingelochungechunge lwensimbi ye-alloyum esetshenziswa kakhulu, into esemqoka yi-magnesium, futhi okuqukethwe kwe-magnesium kuphakathi kuka-3% no-5%, ngakho-ke kubizwa nangokuthi i-aluminium-magnesium alloy. Ezweni lakithi, ipuleti le-aluminium elichungechunge le-5000 lingenye yochungechunge lwe-aluminium evuthiwe ngokwengeziwe. Izici zayo eziyinhloko ubukhulu obuphansi, amandla aphezulu okuqina, kanye nokuqina okuhle. Endaweni efanayo, isisindo se-aluminium-magnesium alloy siphansi kunolunye uchungechunge, ngakho-ke kuvame ukusetshenziswa embonini yezindiza. Vele, ibuye isetshenziswe kabanzi ezimbonini ezijwayelekile.
Isithupha. Uchungechunge lwama-6000 lumele u-6061
Uchungechunge lwe-6000 ikakhulukazi luqukethe izinto ezimbili ze-magnesium ne-silicon, ngakho-ke inezinzuzo zochungechunge lwe-4000 nochungechunge lwe-5000, futhi inokumelana nokugqwala okuhle nokumelana ne-oxidation. I-6061 kulula ukuyibhinca futhi kulula ukuyicubungula, ngakho-ke ijwayele ukusetshenziselwa ukwenza amalunga ahlukahlukene, amakhanda kazibuthe nezingxenye zama-valve.
Isikhombisa. Uchungechunge lwama-7000 lumele ama-7075
Uchungechunge lwama-7000 ikakhulu luqukethe i-zinc futhi luyingxubevange ye-aerospace. Kuyinto ingxubevange ye-aluminium-magnesium-zinc-yethusi enokumelana okuhle kokugqoka. I-7075 ipuleti le-aluminium likhululeke ekucindezelekeni, ngeke likhubazeke ngemuva kokucubungulwa, linobulukhuni namandla kakhulu, ngakho-ke livame ukusetshenziselwa ukwakhiwa kwezakhiwo zezindiza nekusasa.
8. Uchungechunge lwama-8000 lumele u-8011
Uchungechunge lwama-8000 lolo lolunye uchungechunge futhi alusetshenziswa kakhulu. Uchungechunge lwama-8011 angamapuleti e-aluminium umsebenzi wawo omkhulu ukwenza izigqoko zamabhodlela. Zisetshenziswa futhi kuma-radiator, futhi iningi lazo lisetshenziswa kufoyili ye-aluminium.
Uchungechunge oluyi-Nine.9000 luchungechunge oluyisipele, olusetshenziselwa ukubhekana nokuvela kwamapuleti e-aluminium alloy nezinye izinto.
Isikhathi Iposi: Feb-25-2021